Aka chịburu ala Naịjiria ahapụna Abuja gawa mba Briten
Aka chịburu ala Naịjiria, bụrụkwa onye ji aha ndị otu ndọrọndọrọ APC azọ ọkwa onye isi ala na ntụli aka nke a na-akwado ime n’ọnwa Maachị afọ 2015, bụ Jenaral Muhammadu Buhari, ahapugo Abuja gawa mba Briten. Buhari hapụrụ Naịjiria n’ụbọchị Tọzdee jewe mba ofesi, ebe o kwesiri inwe nzukọ.
Ọnụ na-ekwuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC, bụ Mallam Garba Shehu, gwara ndị nta akụkọ, na Buhari kwesiri iji njem a nwee nzukọ n’ebe dị iche iche na Briten. Buhari na ndị isi ọchịchị mba Briten kwesiri inwe nzukọ. Buhari kwesikwara ịgwa ọha n’eze okwu na Royal Institute of International Affairs, nke dị na Chatam House na London.